BURMA: [Big Brothers & Sisters] New doc: သိတယ် သို့ သော် မလုပ် ချင်ကြ ဘူး သို့ သော် ပါးစပ်ဖျားက ပြောကြတယ်။
[Big Brothers & Sisters] New doc: သိတယ် သို့ သော် မလုပ် ချင်ကြ ဘူး သို့ သော် ပါးစပ်ဖျားက ပြောကြတယ်။
Rozoner King created the doc: "သိတယ် သို့ သော် မလုပ် ချင်ကြ ဘူး သို့ သော် ပါးစပ်ဖျားက ပြောကြတယ်။"
[By Let's Work]
ဘယ်သူကြောင့်ဆိုပြီးတော့လက်ညိုးထိုးစရာမလိုပါဘူး။ အပြစ်ကတော့ အားလုံး သော သူတိုင်း ရဲ့ ကိုယ်နဲ့ ကိုယ်သာဖြစ်ပါတယ်။
ပါးစပ်နဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ပြင်းထန်ကြ၊ ချစ်ကြ ၊ အသက်ပေးမတတ် အပြောတွေနဲ့တဒင်္ဂခဏ မှာရှိနေတဲ့ အခင်းအကျင်းရဲ့ 
အနေအထားကို ကြည့်ပြီးတော့ လည်းကောင်း၊ ကြာရှည်စွာ စိတ်ခံစားမှုတွေရဲ့ အပေါ်ကနေ ပေါက်ဖွားလာပြီး ဆင့်ကဲ ထွက်လာတဲ့ စကားစုတွေပါလို့ ဘဲပြောပြောပေါ့ ၊ အားလုံးသိကြပါသည် အဖြေကိုဘယ်လိုရှာရမည်နည်းဆိုတာကို၊ သိတယ် သို့ သော် မလုပ်ချင်ကြဘူး သို့ သော် ပါးစပ်ဖျား နဲ့ ပေါ့ပေါ့လေးပြောချင်ကြချင်ကြသည်။
တစ်ခါတစ်ခါ ပဋိပက္ခများရဲ့တွန်းအားနဲ့ ပေါက်ကွဲထွက်လာတဲ့ လှုပ်ရှားမှု သံစဉ်နဲ့ အဖြစ်အပျက် အခင်းအကျင်းတွေကလည်း
ရှေ့ဆက်ရမဲ့မိမိတို့ ဘ၀ ခရီး (မသေခင်အထိပေါ့) အတွက်တံဆာ ဆင် လုပ်ဆောင်မှု တွေ အဖြစ် တွဲဖို့ ထိ ၊ အားလုံး သော သူတို့ လုပ်တတ်လာကြသည်၊ ကြိုးစားအားထုတ်ကြသည်၊ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ကာလတွေရဲ့ ဖြစ်စဉ်များရဲ့ တွန်းအားများလို့ ဘဲဆိုချင်ပါသည်။
ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ယနေ့ ကြုံတွေနေရတဲ့မြင်ကွင်း၊ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေတွေက သက်သေ ခံပေးနေပါတယ်။
ကဲ အားလုံးမှာအပြစ်ရှိပါတယ် ( အားလုံးဆိုမှတော့ ကျွန်တော်လည်းပါဝင်တယ်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်)
ခေတ်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်ကြီးမှာ သူမှန်တယ် ငါမှန်တယ် သူက တဖက်စွန်း ကိုယ်က တဖက်စွန်း၊ တချို့ က အလည်လတ် စသဖြင့် အားလုံးကိုယ်စီကိုယ်ဌာ့ ကိုယ်ကျင်လည်ရာ ကိုယ်မျက်မြင်ရာ ကိုယ်ရဲ့ တန်ဖိုးထားရာတွေနဲ့ တိုင်းနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ ယနေ့ ထိပြောနေကြပါတယ်။
ဒီနေ့ ထိ အဲလိုပြောနေနိုင်အောင်လည်း ကြားကနေ ရိုးသားသော ပြည်သူတွေမှာ အရောင်ဆိုးခံရသလိုမြေဇာတွေဖြစ်ခဲ့ကြရသည်။
ဆင့်ကဲဆင့်ကဲဖြစ်ပွားလာသော ကွာခြားမှုအတွေးအခေါ်ပဋိပက္ခများကြောင့် နောက်ဆုံး နိုင်ငံနဲ့ တ၀ှမ်းမှာရှိတဲ့ ပြည်သူ ၄၀% က ည နေ့ ထိ တိုင်အောင် ရေ၊ မီး စုံစွာ နဲ့ လည်းကောင်း၊ ကျန်းမားရေး ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုကိုလည်းကောင်း၊၊ ကောင်းမွန်သောပညာရေးစနစ် နဲ့သင်ကြားနိုင်မှုတို့ ကို မရတဲ့အဖြစ် ကို ရောက်သွား ရပါ တော့တယ်။
ဤ သည်လည်း ဘာဘဲပြောပြော အုပ်ချုပ်သူအစိုးအပြစ်ဖြစ်သည်. ဘာဘဲပြောပြော အုပ်ချုပ်သူအစိုးရသည် ခေါင်းခံ ရ မည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော အုပ်စိုးသူအစိုးရ ဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အုပ်ချုက်သူအစိုးရကနေ ပြန်လည်ထိမ်း ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘဲ ဆက်တိုက် မှားယွင်းခဲ့သောအုပ်ချုပ်မှု့ ကြောင့် နိုင်ငံသားဝန်ထမ်းတိုင်းသည်လည်းကောင်း၊ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတပ်မတော်သားတိုင်းသည်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံသားတိုင်းတွင် ခေတ်နဲ့ ကိုချီပြီးတော့ အခွင့်အရေး၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ ခံစားပိုင်ခွင့်ကို ကိုယ်ကျိုးအဖြစ်သုံးတတ်သွားအောင်ကို တွေ့ ရပါတော့သည်။
သေသေချာချာကြည့်လျှင် ဟိုး လွတ်လပ်ရေးရပြီးစကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိမိတို့ ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေါ်မှာ ကိုယ်ကျိုးစီးပွား၊ နိုင်ငံရေး ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဘာသာရေး ထိတိုင်အောင် သိသိသာသာ မသိမသာ အသုံးချလာတာကို တွေ့ ရမည်ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ ပြုလုပ်သည်ကို လည်း အများသူဌာ အားလုံးက ၀ိုင်းဝန်း မျက်စီရှန်းခွင့် ပေးလာ ကြ၊ ပေးကြဖို့ ကြိုးစားကြတယ် ဆိုရင်မမှားပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော သေဖေါ်သေဖက် အကျင့်ပျက်ဖက်ကို ညှိလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အားလုံးသိကြပါတယ် အမှန်လည်းသိကြပါတယ် သို့ ပေမဲ့ အားလုံးအကျင့်ပါသွားပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူနေမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ အုပ်ချုပ်မှု ယန္တယားကြီးထဲမှာ ဒီလို စိတ်မျိုး ဖြစ်တာလာတာကို သတိထားမိသူ ပညာတတ်သူတွေ၊ လေ့လာသူတွေက ထောက်ပြပြောဆိုချင်ပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများရဲ့ စရိုက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဖေ့ါပြီး အကြောင်း ရှာ၊ အကောင်းမြင်ပြီး၊ ကြည့်တတ်တဲ့ အကျင့်၊ ခွင့်လွတ်တတ်တဲ့အကျင့်ကြောင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အပေါ်တွင် အကျိုးရှာယူခြင်းဆိုသော အကျင့်ဆိုးသည် ကျွန်တော်တို့ ယနေ့ ခေတ်ထိ ကပ်ပါလာတော့သည်။
ဘယ်အလွှာ၊ ဘယ်အသိုင်းဝိုင်းဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဖြစ်တည်လာခဲ့တဲ့လှန်ပြီးတော့ပြောဖို့ မကြိုးစားနဲ့ ၊ပြောမယ် ဖွင့်ချ မယ်ဆိုရင် အားလုံးက ပါးကိုက်နားကိုက်ကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ လုပ်ကြပါတယ်။ ဒါက ဘာသာရေး အဖွဲ့ ပေါင်းစုံ ကနေ နိုင်ငံရေး ၊လူမှုရေး အဖွဲ့ များထိဖြစ်နေတာပါ၊
တချိန်တည်းမှာဘဲ အားလုံးက လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ ဒီလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေါ်မှာ ပိုက်ဆံလုပ်တတ်သွားပြီးကိုယ်အတွက်ကိုယ် ကြည့်သွားတတ်ပြီ ဆိုတဲ့အနေအထားကို နေရာတိုင်းမှာ ဖြစ်တည်နေပါတယ်လို့ ယနေ့ လို ခေတ်ကာလမှာပြောရင် မှားမည်မထင်ပါ။
ကြိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ် အောက်မှာသေသေချာချာ ကြည့်ရင်တွေမြင်ရတဲ့ အခင်းအကျင်းတွေက အရှိပကတိ အဖြစ်ပါ။
သို့ ပေမဲ့ ဒီအရှိပကတိတွေရဲ့ပြောင်းလဲအောင်လုပ်ဖို့ အတွက် သိလည်းသိပါတယ် ၊ လုပ်လို့ ရပါတယ်။ သို့ သော် တချိန်တည်းမှာဘဲ
အုပ်ချုပ်သူ အဆင့်လိုက်တွင်ဖြစ်နေသော အရာက ဒီလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ကနေ ငွေကြေးရတယ်ဆိုတာကိုသိနေတယ်။
ဒီငွေကြေးနဲ့ ပေးကမ်းစွန့် ကြဲပြီးအုပ်စုလုပ်မင်းလုပ်နိုင်တာကိုသိနေတယ်။
ဒီလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ရင် မိမိမှာရှိတာတွေအကုန်ဘာမှမတိုးပွားလာနိုင်သလို၊ မိမိပြုခဲ့သော အတိမ်အနက်ပေါ်တွင်မှုတည်ပြီး ပြန်လည် ခံရမဲ့ ကိစ္စအထွေထွေကိုလည်း ထိုသူတို့ ရဲ့ နှလုံးသားအသိမှာကော၊ ဦးနောက်အသိမှာကော ချွမ်းချက်မရှိ နားလည်ထားကြတယ်။
ဒီတော့ ဒီလုပ်ပိုင်ခွင့်ရထားတဲ့နေရာတွေကို လုပ်ဆောင်နေသူ ဘယ်သူကမှ တခြား ဘယ်သူကို မဆို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ လွဲပြောင်းပေးခြင်းလုပ်ဖို့ အတွက် မလုပ်ကြတော့ချေ။
နောက်ဆုံးလွတ်ပေးရသည့်တိုင်အောင် ဒီလုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ အာဏာရှိတုံး မိမိဘ၀အတွက်စည်းစိမ်ချမ်းသာမှုကို ရအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အမြင်တွေ၊ တချိန်တည်းမှာဘဲမိမိအလို ကဲသို့ တူသူများစုရုံးခြင်းဖြင့် နယ် စား၊ မြို စား များ ထာဝရ ရပ်တည်နေချင်ကြတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတိုင်းလိုလိုမှာ ရှိနေပါတယ်။ အထုူးသဖြင့် လက်နက်များကိုင်ကာ စစ်မင်းများသဖွယ် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရထား ကြသော စစ်တိုင်းမှူးများ၊ နယ်မှူးများ၊ ဒေသမှူးများ သူ နေရာနဲ့ သူအာဏာနဲ့ သူအလျှောက်ဖြစ်သလို၊ တော်လှန်ရေး လက်နက်ကိုင် အုပ်စုများလည်း ထို့ အတူပင်ဖြစ်သည်။ ( သူခိုးကြီးနဲ့ သူခိုးလေးဘဲကွာပါသည်)
အာဏာနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့် ၊ငွေကြေး တို့ သည် ထိုလက်နက် ကိုင် စစ်မင်းများ၊ လက်နက်ကိုင် အုပ်စု များအတွက် ကိုယ်ကျိုး စီပွားရေးသဖွယ် ဖြစ်တည်လာတော့သည်။ စီးပွားရေးလေးဆန်လာသည်။ လူမှုရေး၊ လူအခွင့်အရေး၊ ဘာရေးညာရေးတို့ သည် ထိုသူတို့ တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် အတွက် ပါဝါ ညှိစရာ တွင်လို အပ်သော အသုံးချစရာ စကားလုံးများဖြစ်လာတော့သည်။
ထိုကဲ့သို့ လည်းဖြစ်တည်နေသည်ကို သေသေချာချာကြည့်လျှင် ယနေ့ ကုန်လွန်ခဲ့သော နှစ် ၂၀ အတွင်းကောင်း ကောင်း ကြီးမြင်သာအောင်ရှာဖွေ လေ့လာလို့ ရနိုင်ပါသည်။
မိမိတို့ ရဲ့ ပါဝါနဲ့ အာဏာနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် ကိုထိလာသည်ထင်တာနဲ့ ချကစားစရာ အကြောင်းအရာများကို တဖက်နဲ့ တဖက် မစားရ၀မခန်း တင်ပြပြောဆိုကြတော့သည်။ ထိပါးတိုက်ခိုက် ဖြိုခွင်းရန်ရှာ ကြတော့သည်။
ရိုးသားတဲ့ အများပြည်သူတွေသာ အချောင် ဆေးဆိုးပန်းရိုက်လုပ်တာကို ခံရသည်။ ရိုးသားတဲ့ပြည်သူတွေ သည် သူတို့ ဘ၀ဧချမ်းပြီးပျော်ရွင်စွာနဲ့ လုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့ နဲ့ ယုံကြည်ရာ ဘာသာအတိုင်းကျင့်ကြံနေထိုင်သွားဖို့ သာစိတ်ဝင်စားကြသည်။
သို့ သော် ထို့ သို့ နေထိုင်ခွင့်ကို မပေးချေ၊ ထိုသူတို့ ကာမည်သူနည်း ၊
မည်သို့ ပင်ဆိုစေကာမှု သမိုင်းရေစီးကြောင်းသည် ရပ်တန့် မနေပါ၊ စီးဆင်းနေမြဲဖြစ်သည်။ သည့်အတွက် ဆက်လက်လိုက်ပါနေရအုံးမည်မှာ နိုင်ငံသားတိုင်းဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် ယနေ့ အချိန်သည် နိုင်ငံရေးအသွင်ပြောင်း သည်ကာလဘဲဆိုဆို၊ ခေတ်သစ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကို ဘဲချီတက်သည်ဖြစ်စေ၊ အရေးကြီးသည်မှာ ဦးဆောင်သူ က စပြီး
အောက်ခြေ ပြည်သူထိ အထိ အမျိုးသားရေးအသွင်ဖြင့် မိမိတို့ ရဲ့ အနူတ်လက္ခဏာကို ဆောင်နေသော အကျင့်စာရိတ္တ တွေကို အရင်ဆုံးပြုပြင်ရပါတော့မည်လို့ ယုံကြည်ပါသည်။
ဤကိစ္စသည် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အရေးကြီးသော ပထမဆုံး အလုပ်ဖြစ်ပါသည်. ငြိမ်းချမ်းရေး ၊ပြည်တွင်းစစ်ရပ်ဆဲရေးထက် ပိုပြီးတော့ အရေးကြီးပါသည်။ စိတ်ဓါတ်ယိုယွင်းပျက်ဆီးနေပါတယ်ဆိုမှတော့ ထိုငြိမ်းချမ်းရေး ၊ပြည်တွင်းစစ်ရပ်ဆဲရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ တရားမျှတရေး၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ တန်းတူ ညီတူရှိရေး စသဖြင့်စသဖြင့် တို့ သည် အချည်းနှီးသာဖြစ်သည်။
Posted by Freedom Burma at 10:28